Onye nrụpụta kacha elu nke onye na -ebi obere akwụkwọ kemgbe 2010
Onye nbipute nnata
Onye na -ebipụta aha
2 inch/58mm Usoro
3 Inch/80 mm Usoro
Usoro mbufe ọkụ
Ememe mgbụsị akwụkwọ nke etiti (otu n'ime ememme ọdịnala anọ nke China)
Ememe Mgbụsị akwụkwọ nke etiti, nke a makwaara dị ka Ememme Ọnwa, ụbọchị ọmụmụ ọnwa, ọnwa Eve, ememme mgbụsị akwụkwọ, mmemme mgbụsị akwụkwọ nke etiti, ememme ofufe ọnwa, Ememme YueNiang, Ememme Ọnwa na mmemme njikọta, nke bụ emume ọdịnala n'etiti ndị China. Ememe etiti mgbụsị akwụkwọ nke sitere na ...
Kedu ka esi ebipụta akwụkwọ ncha ọkụ?
Ụkpụrụ nke onye nbipute ọkụ bụ ikpuchi ihe nkiri na -acha uhie uhie na ihe na -acha ọkụ (na -abụkarị akwụkwọ) wee tụgharịa fim ahụ ka ọ bụrụ agba gbara ọchịchịrị (n'ozuzu ya bụ oji ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ) mgbe kpochara ọkụ ruo oge ụfọdụ. A na -emepụta onyonyo a site na mmeghachi ọkụ na mmeghachi omume kemịkal na fim ahụ. Chemical a bụ ...
Desktop Thermal Label Printer Desktop Thermal Label Printers bụ ihe zuru oke maka ibipụta aha mbupu, akara maka ngwa mkpọsa, nsuso ngwa ahịa ma ọ bụ arụmọrụ akara obere nke chọrọ obere mbipụta mbipụta. A na -akpọkarị ya dị ka ndị na -ebi akwụkwọ akara mbupu, ndị na -ebipụta desktọpụ, na -ebipụta ...
4 nke ndị na -ebi akwụkwọ ọkụ kacha mma ịzụta na 2021
Ị nwere ọchịchọ ịmata gbasara ndị na -ebi akwụkwọ ọkụ kacha mma ịzụta na 2021? Ị nwere ike ịchọta nkọwa nke ndị na -ebi akwụkwọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ibipụta akara na akwụkwọ nnabata, ị ga -ahụ nke a kacha mma ndị na -ebi akwụkwọ ọkụ na -enyocha nke ọma mgbe ị na -azụ ihe. Ma enwere ọtụtụ ihe ị ga -eme ...
Ndụmọdụ maka otu esi ahọrọ ezigbo onye nbipute ọkụ maka azụmahịa gị
N'oge a, a na -eji ngwa nbipute ọkụ na -abawanye ebe niile, na -enwekwa ọtụtụ ọrụ. Yabụ kedu igwe nbipute ọkụ dịịrị gị mma? Enwere ọtụtụ ụdị na ọrụ dị iche iche nke ndị na -ebi akwụkwọ n'ahịa maka nhọrọ gị, ụfọdụ maka akwụkwọ nnata ego, ụfọdụ maka akara ibipụta akwụkwọ, na ụfọdụ maka ...
Kedu ihe anyị kwesịrị ime mgbe onye nbipute barcode na -edobe akwụkwọ na -ekpo ọkụ oghere
Mgbe ị na -eji ngwa nbipute barcode maka ibipụta, bipụta akwụkwọ akara oghere ụdị ọnọdụ a bụ nsogbu nkịtị. Karịsịa na ngwa nbipute koodu mgbe ị gbanwechara akwụkwọ mkpado ma ọ bụ eriri carbon, onye na -ebi akwụkwọ barcode dị mfe ịwụ elu ihe ma ọ bụ nsogbu nke ọtụtụ akwụkwọ oghere, yana ...
Ụdị onye na -ebi akwụkwọ barcode yana otu esi ahọrọ onye nbipute barcode dabara adaba
1. Ụkpụrụ na -arụ ọrụ nke onye na -ebi akwụkwọ koodu barcode nwere ike kewaa ụzọ mbipụta abụọ: mbipụta ọkụ ọkụ ozugbo na mbipụta mbufe ọkụ. (1) Mbipụta ọkụ ọkụ ozugbo Ọ na -ezo aka na ọkụ na -eme mgbe isi ebipụta kpụ ọkụ n'ọnụ, nke a na -ebuga na akwụkwọ ọkụ ahụ t ...
Akụkọ mmepe nke onye na -ebi akwụkwọ na teknụzụ mbipụta ugbu a
Akụkọ ihe mere eme nke ngwa nbipute bụkwa akụkọ banyere teknụzụ dị elu na ụlọ ọrụ. Kemgbe afọ ndị 1970, laser, inkjet, obibi akwụkwọ ọkụ na teknụzụ mbipụta ndị ọzọ na-adịghị emetụta apụtawo wee jiri nwayọọ nwayọọ tozuo okè. A na -ebu ụzọ jiri usoro ide ọkụ ọkụ nke isi ebipụta na fax mach ...
Mgbanwe ọnọdụ Pringting nke WP-Q2A
site na nchịkwa na 21-06-24
Ndewo onye ọ bụla, n'izu a, m ga-ewetara gị WINPAL star thermal printer: thermal mobile printer WP-Q2A. WP-Q2A bụ ngwa nbipute okpukpu abụọ nke anụ ọhịa 2-inch nke na-abịa na 100 mm/s Max. Ọ bụ ezigbo nhọrọ gị ma ọ bụrụ na ...
Nka na -ahụ maka nrụzi ihe ọkụ na isi ihe
Thermal Printer bụ ngwaọrụ elektrọnik dị mkpa na ndụ anyị kwa ụbọchị, n'agbanyeghị ụlọ ọrụ ma ọ bụ n'ụlọ. Onye na -ebipute ọkụ bụ nke oriri, ngwongwo na oriri na -ebu nnukwu ibu, yabụ anyị kwesịrị ịkpachara anya na ndụ anyị kwa ụbọchị. Good mmezi, ọrụ ndụ ga -aba, ogbenye mainte ...
Obi ụtọ Dragọn ụgbọ mmiri ememme
Ememe ụgbọ mmiri dragọn, bụ ezumike ọdịnala ndị China, na -abịa n'oge na -adịghị anya. Ememe ụgbọ mmiri dragọn ahụ dara n'ụbọchị nke ise nke ọnwa nke ise, nke dịkwa na 6.14 na kalenda anyanwụ. Dika ọkwa nhazi ezumike mba, WINPAL ga -enwe ezumike na June 12 na…
Etu ị ga -esi wụnye mpe mpe akwa nke onye na -ebi akwụkwọ mbufe ọkụ WP300A
WP300A dị na ma ọkụ ọkụ na mbufe ọkụ, ọ nwere ihe nrụpụta 32-bit dị ike maka akara ngwa ngwa n'ofe yana 4MB ebe nchekwa, 8MB SDRAM, onye na-agụ kaadị SD maka ịgbasa ebe nchekwa Flash, ruo 4 GB maka ịbawanye nchekwa nke fo. .
Onye na -ebi akwụkwọ nnata ọkụ 80mm, Onye nbipute nnata, Mobile Printer, Onye nbipute nnata ekwentị, 80mm Onye nbipute nnata ọkụ, Onye na -ebi akwụkwọ na -enweta okpomọkụ,